Tic Tac Toe 🥇 Gwuo n'onlinentanet n'efu maka emulator.online
Tic Tac Toe Kedu onye na-egwụbeghị tic-tac-to? Nke a bụ otu n'ime ihe omume ntụrụndụ na-atọkarị ụtọ ma na-atọ ụtọ icheta. E wezụga na mfe ma na ngwa ngwa, egwuregwu a na-enyere aka nke ukwuu mma gị mgbagha ikike.
Tic Tac Toe: olee otu esi egwu egwu site na nzọụkwụ? 🙂
Gwuo egwu Blackjack online n'efu, naanị soro ntuziaka ndị a :
nzọụkwụ 1 . Mepee ihe nchọgharị gị masịrị ma gaa na ebe nrụọrụ weebụ egwuregwu Emulator.online.
nzọụkwụ 2 . Ozugbo ị banyere websaịtị, a ga-egosipụta egwuregwu ahụ na ihuenyo ahụ. Naanị ị ga-pịa Play ma ị nwere ike ịmalite igwu egwu, họrọ igwu egwu megide igwe ma ọ bụ soro enyi gi gwurie egwu. Nwekwara ike ịhọrọ ọnụọgụ nke ogwe osisi kwesịrị inwe.
Kwụpụ 3. Ndị a bụ ụfọdụ bọtịnụ bara uru. Ị nwere ike " Tinye ma ọ bụ wepu ụda ", see" Play "bọtịnụ ma malite igwu egwu, ị nwere ike" kwusi "Na" Malitegharịa ekwentị "n'oge ọ bụla.
Kwụpụ 4. na- atọ taịl gị ga-akwụba n’ahịrị, ịgbasa ma ọ bụ n’usoro.
Enwere ọtụtụ saịtị na-eme Tic Tac Toe dị n'efu. I nwere ike iji robot ma ọ bụ mmadụ egwuri egwu. Ọbụna Google na-eme ka ọ dị. Na nkenke, naanị ịchọrọ ịchọ "tic-tac-toe" n'elu ikpo okwu.
Karịsịa, egwuregwu a dabara adaba onye ọ bụla site na afọ ise.
Gịnị bụ Tic Tac Toe? 🤓
Tic Tac Toe bụ egwuregwu dị oke egwu nke iwu, nke na-adịghị eweta nnukwu nsogbu nye ndị egwuregwu ya ma a na-amụta ya ngwa ngwa. Amaghi ebe osi malite, ya na ihe ndi n’egosi na ogabu malitere n’Ijipt oge ochie, ebe achoputara trays nke esere n’elu nkume, ihe kariri puku ato na nari ato.
Ebumnuche nke egwuregwu ahụ bụ itinye O ma ọ bụ atọ X na akara kwụ ọtọ.
Akụkọ banyere Tic Tac Toe 😄
Egwuregwu ahụ ghọrọ ihe ama ama na England na 19th narị afọ , mgbe ụmụ nwanyị gbakọtara n’ehihie iji kwuo okwu na ịkpa ákwà. Agbanyeghị, ndị okenye ahụ, n'ihi na ha enweghịzi ike ịkwa akwa n'ihi anya ha na-esighị ike, egwuregwu ahụ akpọrọ aha ya nabatara ha Noughts na Obe .
Mana mbido egwuregwu a tọrọ nká. Ihe e gwupụtara na Kurna temple n’Ijipt achọtara aka na ya site na 14th narị afọ BC . Ma ihe ndi ozo banyere ihe ochie na-egosi na Tic Tac Toe na otutu ihe ndi ozo ndi ozo yiri ya n'adabereghị na mpaghara ụwa dị iche iche : a na-egwuri egwu na China oge ochie, pre-Columbian America na Alaeze Ukwu Rom, tinyere ndị ọzọ.
Na 1952, na EDSAC egwuregwu kọmputa OXO mepụtara, ebe onye ọkpụkpọ ahụ mara kọmputa ahụ na egwuregwu Tic Tac Toe. Otú a ka otu n'ime egwuregwu vidio mbụ si nwee akụkọ dị na ya.
Ickpụrụ Mkpịsị Aka 📏
Bọdụ bụ a ahịrị atọ site na kọlụm atọ matriks .
Ndị egwuregwu abụọ na-ahọrọ otu akara ọ bụla, na-abụkarị a okirikiri (O) na obe (X).
Ndị na-egwu egwu na-egwu ọzọ, otu aga kwa uzo , na oghere dị na bọọdụ.
Ebumnobi bụ nweta okirikiri atọ ma ọ bụ obe atọ n’usoro , ma ọ bụ ntanetị, kwụ ọtọ ma ọ bụ na ntanetị, ma n'otu oge ahụ, mgbe ọ bụla o kwere mee, gbochie onye iro ahụ imeri na-esote ya.
Mgbe onye ọkpụkpọ nwetara ebumnobi, a na-ahụkarị akara atọ a.
Ọ bụrụ na ndị egwuregwu abụọ na-egwu egwu mgbe niile, egwuregwu ga-akwụsị mgbe niile na a Olee.
Ebumnuche nke egwuregwu ahụ dị mfe, yabụ na ọ naghị esiri ike iwepụta ma ọ bụ buo ohere niile iji mee njem kachasị mma, ọ bụ ezie na ọnụọgụ nke ohere dị nnukwu, ọtụtụ dị nro na iwu dị mfe.
Maka nke a, ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka egwuregwu a ga-adọta (ma ọ bụ "mee agadi").
Winner : Ọ bụrụ na ị nwere mpempe abụọ n'ahịrị, debe nke atọ.
Gbochie : Ọ bụrụ na onye mmegide ahụ nwere mpempe akwụkwọ abụọ n’ahịrị, debe nke atọ iji gbochie ya.
triangle - Mepụta ohere ị ga - emeri n’ụzọ abụọ.
Gbochie triangle onye iro ahụ
Center Gwuo na etiti.
Ihe efu Kuku - Gwuo na ebe tọgbọ chakoo.
Ndụmọdụ otu esi emeri
Iji nwee echiche ezi uche dị na ya, ihe omume ntụrụndụ a nwere ụfọdụ usoro aghụghọ na-enyere aka mgbe ị na-apụ.
1 - Debe otu akara na nkuku bọọdụ
Ka e were ya na otu n’ime ndị egwuregwu ahụ tinyere X n’otu akụkụ. Usoro a na - enyere aka ime ka onye na - emegide ya mehie, n'ihi na ọ bụrụ na ọ tinye O na oghere dị n'etiti ma ọ bụ n'akụkụ mbadamba, ọ ga - efunahụ.
2 - Gbochie onye mmegide ahụ
Agbanyeghị, ọ bụrụ na onye iro ahụ etinye O n'etiti, ị kwesịrị ịnwale itinye X na ahịrị nwere naanị oghere oghere n'etiti akara ya. Yabụ, ị ga - egbochi onye iro ahụ wee mepụta ohere maka mmeri gị.
3- Mee ka ohere mmeri gị dịkwuo elu
Iji mee ka o nwekwuo mmeri gị, ọ dị mma mgbe niile itinye akara gị na ahịrị dị iche iche. Ọ bụrụ na itinye Xs abụọ n’usoro, onye iro gị ga-achọpụta ma gbochie gị. Mana ọ bụrụ na ị gbasaa X gị na usoro ndị ọzọ, ị na-eme ka ohere ịnweta mmeri gị dịkwuo ukwuu.
Otu esi eme mmadu Tic Tac Toe?
Chịkọta bọọdụ ahụ
Họrọ oghere, ebe dị larịị ka igwu egwu. Na-esote, kesaa okpu hula na ahịrị atọ na ahịrị atọ, dị ka akwụkwọ egwuregwu tic-tac-toe game. Ahapụkwala ohere dị ukwuu n’etiti okpu.
Ọ bụrụ na ị na-egwuri egwu n'ime ụlọ na ụlọ siri ike, jiri teepu mee mbadamba . Na ihe, ị nwekwara ike ịdọrọ ahịrị na nzu.
Ka onye ọ bụla ghara imerụ ahụ n’egwuregwu ahụ, lee ala maka oghere, irighiri ihe ndị dị ize ndụ (dị ka iko gbawara agbawa), ma ọ bụ ụdị ihe egwu ndị ọzọ, dị ka mgbọrọgwụ na okwute.
Gbalịa ịhazi ihe karịrị otu bọọdụ ma ọ bụrụ na ịnwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị egwuregwu. Dị ka o kwesịrị, otu ọ bụla kwesịrị inwe n'etiti otu na mmadụ atọ sonyere.
Egwuregwu mmadụ tic-tac-toe nwere ike igwu egwu n'otu n'otu ma ọ bụ na otu. N’okwu nke abụọ, otu ọ bụla ga-enwerịrị ihe karịrị atọ. Otu bọọdụ nke ọ bụla ga-enwe otu egwuregwu abụọ na-asọ mpi, otu n’otu akụkụ.
Nwere ike ịhapụ ndị otu nwere ihe karịrị atọ, mana nke a ga-eme ka egwuregwu kwụsịlata ma nwee ike agwụ ike egwuregwu.
Họrọ otu ị ga-amalite
Họrọ onye ga - eji mkpụrụ ego ma ọ bụ mkpụrụ ego mee ihe izizi. Nhọrọ ọzọ bụ ịjụ ndị otu ọ bụla ka ha họrọ onye ndu ha ga - ewere, onye ga - ebido na nkume, akwụkwọ, na mkpa. Ndị otu egwuregwu ga - enweta X, ebe ndị ọzọ ga - enweta O.
Iji mee ka egwuregwu ahụ dịkwuo egwu, jụọ ndị egwuregwu ka ha sonye na njem a na-eme ma were nzọụkwụ mbụ maka ndị mmeri.
Na-egwu egwu ruo mgbe otu egwuregwu nwere ike jupụta n'ámá atọ n'usoro. Nye akpa uwe akwa anọ maka otu ọ bụla. Jiri akpa dị iche iche dị iche iche iji mara ọdịiche dị na X na O. Otu ọ bụla ga-etinye otu akpa na bọọdụ otu oge ruo mgbe otu n’ime ha meriri ma ọ bụ egwuregwu ahụ adọta. Ọ bụrụ n’ìgwè nwere ihe karịrị otu onye so na ya, jụọ otu onye òtù nke ọ bụla igwu n’otu oge.
Wepu akpa ndị ahụ na bọọdụ iji malitegharịa egwuregwu ahụ. Ya mere na ike gwụ ndị sonyere mgbe niile igwu egwu n'otu otu, gbalịa ịdị na-agbanwe ibe ha.